Su'aal: Shumaca iyo Fara-badnaha?
Author Topic: Su'aal: Shumaca iyo Fara-badnaha? (Read 1601 times)
« on: October 27, 2016, 01:06:54 PM »
su aasheyda waxay tahay
waxaan layaabay qololka guryaha waxaa ladhigaa shumay shumacaasna hoostiisa waxaa badana ku dhasho fara badne ee maxaa saba in uu ku dhasho shumaca farbad nahay mana la arko isagoo ku socda shumaca korkiisa waxaa kali la arkayaa isaga oo kujira shumaca hoostisa thanks ditoore
Re: Su'aal: Shumaca iyo Fara-badnaha?
« Reply #1 on: October 31, 2016, 04:07:30 PM »
Fara-badanaha ma ahan inuu shumaca hoostiisa uu ku dhashay, ee wuxuu jecel yahay inuu ku hoos noolaado, sababtoo wuxuu ka helaa ku noolaanshaha meelaha diirrimaadka leh ee qoyan, maxaayeelay qaab dhismeedka sambabahooda ayaan saamaxaynin inay meel qabow ama aad u kulul ay ku noolaadaan.
Wuxuu kaluu cunaa oo uu ku nool yahay quraanshada, kutaanta, dhiqlaha, caarada iyo barambarada, waana xayawaano uu si sahlan ku heli karo isagoo ku hoos jira meeshaas.
Views: 2411 April 04, 2016, 01:22:47 PM
Su'aal: Xaaaskeyga ayaa markeey hool fara badan?
Views: 1829 July 16, 2016, 02:11:27 PM
Su'aal: Waxaan ka cabanayaa daal fara badan?
Views: 3230 October 07, 2011, 04:51:04 PM
Su'aal: Waxaan qabaa hingo aad u fara badan?
Started by DarbaalBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 3432 May 07, 2015, 11:43:30 AM
Su'aal: Timo daadasho iyo agool fara badan?
Started by Axmed114Board Qaybta Su'aalaha
Views: 2127 March 10, 2017, 08:34:20 PM